Paul-Louis Rafanomezantsoa - Wikipedia
Teraka tanaty fianakaviana katolika tena nafana fo i Mompera Paul-Louis Rafanomezantsoa (14 jolay 1951 – 1 Septambra 2007) . 7 lahy sy 3 vavy izy ireo no naterak’ireo ray aman-dreniny dia Rasambo Pierre izay Chef Comptable niasa tamin’ny Trésor sy Razafindravao Jeanne Marie. Tao Ambohibory antampon-tanànan’i Fianarantsoa no nonina izy ireo, fa avy any Isorana no tena fiaviany.
Nianatra tao amin’ny Seminera Zandriny tao Kianjasoa Fianarantsoa izy tamin’ny taona 1965 hatramin’ny 1970, ary avy eo tao amin’ny Kolejy Masindahy François Xavier ao Ambatomena ny 1970 hatramin’ny 1973, ka nahazoany ny Bakalaorea serie B amin’ny taranja siantifika sy ekonomia. Teo izy no nanapa-kevitra hiditra ao amin’ny Fikambanan’i Jesoa ka nanomboka ny Novisia tany Analamahitsy ny 4 janoary 1974, teo ambany fanabeazan’i Mompera Antoine Rahajarizafy sy Joseph Cancemi.
Nanao ny Voady Voalohany maha-relijiozy izy ny 8 janoary 1978 tao amin’ny Kolejy Masina Misely teo anatrehan’i mompera Philibert Randriambololona izay Provincial tamin’izany. Fa talohan’izay, ny taona 1974 hatramin’ny 1976 dia nanao ny fianarana filozofia sy teolojia fototra izy. Ary nohon’ny nahafatesan’i Mompera Rahajarizafy teo am-panombohany ny Novisia, dia ny taona 1977 izy vao tena nanao ny taona “canonique”, taorian’ny fianarana filozofia.
Ny janoary hatramin’ny aogositra 1978 dia niana-draharaha tao amin’ny Sampana Zandriny ao amin’ny Kolejy Masina Misely izy. Dia nalefa hianatra teolojia taty Roma ny septambra 1978.
Ny 6 septambra 1981 izy no nohamasin’i Mgr Gilbert Ramanantoanina ho pretra tao amin’ny Katedralin’i Fianarantsoa. Dia niverina niasa tao amin’ny Kolejy Masina Misely indray izy, ka pretra mpitantana ara-panahy ny sampana Zandriny izay tena nankafizana azy; ary koa nanampy ny mpiandraikitra ny fandaharanam-pivavahana katolika tao amin’ny Onjam-peom-pirenena.
Ny aogositra 1982 hatramin’ny jolay 1985 dia niverina teto Roma indray izy, nanohy nandalina ny teolojia sy nianatra momba ny haino aman-jery. Dia avy dia nampihatra izay norantoviny izy fony tafaverina tao Antanànarivo, ka sady pretra mpitantana ara-panahy ihany tao amin’ny Kolejy Masina Misely, no nanampy tao amin’ny fandaharana katolika tao amin’ny onjam-peo.
Tamin’ny taona 1989 dia mbola nanao herin-taona fanatevenam-pahalalàna momba ny serasera taty Italie izy. Ary dia nizotra nanao ny “Troisième Année” tany Québec Canada ny 1990-1991 teo ambany fitantanan’i Mompera Bernard Carrière. Nandritra io fotoana io no nahavoan’ny “infarctus” azy ka nahatonga azy hatreo hampihena ny asa ataony. Reha niverina avy tany Canada izy dia ny Tranom-pirinty Ambozontany ao Analamahitsy no nisy azy nanomboka ny faran’ny 1991, ka nananganany ny tano fandraisam-peo (studio) Sandratra, sy niasany teo anivon’ny Radio Don Bosco teny Ivato, ka nanatontosany fandaharana tafatafa “hono ho’aho mompera” sy nanaovany fandaharam-pivavahana samihafa koa.
Nijanona tao Analamahitsy izy hatramin’ny 2001 vao niverina indray tao amin’ny Kolejy Masina Misely mba hanomboka ny asa goavana fanokafana ny Sekoly Ambony momba ny Serasera sy ny Fifandraisana. Fa dia mbola nanohy koa ny fandaharany tao amin’ny Radio Don Bosco.
Ny volana mars 2003 izy dia voatery nalefa hitsabo tena aty Italie rehefa nihombo ny areti-maso izay nohafainganin’ny diabeta. Nipetraka tao amin’ny Tranon’ny Mpanoratra, Communauté masindahy Pierre Canisius ao akaikin’ny trano Foibe Jeneralin’ny Fikambanana. Ny jolay 2005 izy no nanatevin-daharana ny communauté eto Bellarmino ka nanao ny asan’ny pretra mpitantana ara-panahy. Ary ny oktobra 2006 no nanombohany ny fiandraiketana ara-pastoraly ny Malagasy eran’i Italie.
Tsy lavorary ny fahasalamany, kanefa dia nihoitra hatramin’ny farany izy na dia nihena hatrany aza ny fahitany. Tsy nahasakana azy izany hitana avo ny herimpo ka nampitolagaga ny rahalahiny rehetra.
Teo am-panombohan’ity taona 2007 ity, dia nanam-paniriana handalo hanao vakansy any Madagasikara izy ; kanjo voatery nofoanany izany satria voatery nanavao ny taratasy fahazoa-mitoetra eto Italie izy. Ny 31 aogositra teo izy no namonjy ny communauté ndry masera Carmélites Mineures de la Charité any Reggio Emilia hanome azy ireo ny laretirety fanao isan-taona. Ny marainan’ny 1 septambra dia tratran’ny fihetsehan’ny aretim-po tampoka izy. Nentina haingana tany amin’ny hopitaly tao Reggio, fa tsy tana ny ainy fotoana vitsy monja tokony ho tamn’ny 6 ora sy sasany maraina. Tonga eto Roma ny vatana mangatsiakany, anio 05 septambra 2007 ary alevina eto koa araka ny fomban’ny Zezoita fa milevina eo amin’ny tany nisy azy farany ny mpikambana rehefa nodimandry.
“Midira amin’ny hafalian’ny Tomponao ry mpanompo tsara sy mahatoky”
Nadika avy ao amin'ny www.malagasy.it
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul-Louis_Rafanomezantsoa&oldid=691386"
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2014 amin'ny 13:40 ity pejy ity.